kid – Page3– Healthy Life Journal
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) အသက်ခြောက်လမှ ခြောက်နှစ်ကြား ကလေးတွေမှာ အဖျားကြီးပြီးတတ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးအယောက်၃၀မှာ တစ်ယောက်လောက် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး အများအားဖြင့် ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် မရှိသလိုဦးနှောက်ကိုထိခိုက်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတက်သွားတာကို မြင်သိလိုက်ရတဲ့ မိဘတွေအတွက်တော့အရမ်းကိုစိတ်ပူပြီး ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိ အခြေအနေမျိုးပါပဲ။ အဖျားကြီးတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ...
ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်လိုသရေစာ ထည့်ပေးသင့်သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. အခုဆိုရင် ကလေးတွေကျောင်းဖွင့်တော့ နေ့လယ်စာထမင်းဘူးအပြင် သရေစာမုန့်လေးတွေပါ ထည့်ပေးရပါတယ်။ မုန့်ဖိုးလည်း မပေးချင်သေးဘူးလေ။ အဲဒါ ဘယ်လိုသရေစာတွေကို ထည့်ပေးသင့်ပါသလဲ။ ဘယ်လို မုန့်ပဲသရေစာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုရှိပါသလဲရှင်။ မဝင့်ဝါမော်၊ တောင်ဥက္ကလာ။ ဖြေ....
ကလေး ဝမ်းချုပ်တဲ့ ပြဿနာ
မေး ။ ကျွန်တော့်သားလေး ၁နှစ် ၂လရှိပါပြီ။ ဝမ်းကို သုံးရက်တစ်ခါ ချူပေးနေရတယ်။ ဝမ်းမချူရင် မသွားဘူး။ ဘာတွေလုပ်ဖို့လို့အပ်ပါလဲ အကြံပေးပါဦး ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Naw Si (Fb) ဒေါက်တာငြိမ်းအေးဝင့် (ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ...
ကလေးခေါင်း အနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (Minor Head Injury / Concussion)
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) တစ်ခါတရံ ကလေးတွေဆော့ကစားရင်းဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်စေ ခေါင်းကိုထိခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ ဆေးရုံပို့ရမှာလား၊ ဦးနှောက်ထိပြီး ဉာဏ်ရည်တွေ နိမ့်သွားတော့မှာလား၊ အသက်အန္တရာယ်များရှိလား စသဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာဖြစ်စေပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက် ခေါင်းပေါက်၊ ခေါင်းကွဲ၊ ဖူးရောင်တာတွေက ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက စိုးရိမ်စရာလိုလား...
တီဗီကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်းနှင့် ကလေးမျက်စိကျန်းမာရေး
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး. တစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတွေ တီဗီအကြည့်များတာကြောင့် မျက်စိမှာဘယ်လိုထိခိုက်မှုဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. တစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးတွေ တီဗီအကြည့်များတာကြောင့် မျက်စိမှာ ဘယ်လိုထိခိုက်မှုမှ မရှိဘူးလို့ပဲပြောရမယ်။ မျက်စိရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာက ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်တာကြောင့် တီဗီကြည့်တာက အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ် (Visual Stimulus) ဖြစ်လို့ပါ။ တစ်နှစ်သားအရွယ်ဆိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတဲ့အတွက်...
ကျောင်းနေကလေးများ၏ထက်ဝက်နီးပါးက နေ့လယ်စာထမင်းဘူးကို ကုန်အောင်မစားကြကြောင်း သိရ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)၊ ကျောင်းနေကလေးများ၏ ထက်ဝက်နီးပါး (၄၆ ရာခိုင်နှုန်း)က နေ့လယ်စာ ထမင်းဘူးကို ကုန်အောင်မစားကြဘဲ စားကြွင်းစားကျန်များကို လွှင့်ပစ်ကြကြောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော၊ အသက် ၇ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာကလေးငယ်...
ရန်ဖြစ်တဲ့ မိဘ၊ စိတ်မရွှင်ပျတဲ့ ရင်သွေး (၃)
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေကို ဘယ်လို ကူညီပံ့ပိုး ပေးနိုင်သလဲ။ ကလေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ သူတွေကတော့- (က) ကလေးနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်စုဝင် တစ်ဦးဦး၊ (ခ) ခင်မင်စိတ်ချရတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦး၊ (ဂ) မိသားစုနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့...
ကလေး ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမြင့်မားစေဖို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ ရွေးချယ်ကျွေးသင့်သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေက ဉာဏ်ရည်ဉာဏ် သွေးမြင့်မားတာမှန်ပေမယ့် တချို့ကလေးတွေက စာသင်ရင် စိတ်မဝင်စားတာ၊ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းနည်းတာ၊ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ် လွယ်တာ၊ အဆော့လွန်တာ၊ အငြိမ်မနေတာစတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေလေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ကလေးတွေကို ဦးနှောက်အသိဉာဏ်...
အရမ်းငိုတဲ့ ကလေးလေးတွေ . . . .
ဒေါက်တာသီရိ (MBBS,MPH,DCH) နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း လနဲ့ချီပြီး အရမ်းငိုတဲ့က လေးလေးတွေကြောင့် ဖေဖေမေမေတို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ စိတ်တွေပူ၊ ချော့မရနဲ့ ကိုယ်ပါရောငိုချင် လောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ အချိန်မျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ အဲ့လိုကလေးလေးတွေကို Colic Crying Baby/Unsettling Baby လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ နှစ်ပတ်ကနေ လေးလအတွင်း...
ကလေးတစ်ယောက်ကြီးပြင်းရန် အကောင်းဆုံး နိုင်ငံစာရင်းတွင် နော်ဝေနှင့် စလိုဗေးနီးယားတို့ ထိပ်ဆုံးတွင် ပူးတွဲရပ်တည် မြန်မာ အဆင့် ၁၁၂တွင်ရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ Save The Children အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ၂၀၁၇ အစီရင်ခံစာအရ ကလေးတစ်ယောက်ကြီးပြင်းဖို့ အကောင်းဆုံးနိုင်ငံစာရင်းမှာ နော်ဝေနဲ့ စလိုဗေးနီးယားတို့က ထိပ်ဆုံးမှာ ပူးတွဲရပ်တည်နေပါတယ်။ သူ့နောက်မှာ ဖင်လန်၊ နယ်သာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ပေါ်တူဂီ၊ အိုင်ယာလန်စတဲ့...